Hadadan Difaac lahayn Ha Daandansan Dadka, United oo Ceeb ka Arar ah ayaa Guul Soo laabasho Cajiiba ka Gaaray City | Puntland
Apr 8, 2018 - Aragtiyood
Waxa markale xalay aduunka la arkay Manchester unitediida la yaqaanay kadib markii aygaaran guul soo laabasho leh oo ay ahayd rogaal celin cajiiba waana waxa lagu yaqaanay mudo ka hor.
Waxa xalay garoonka Etihad ee magalada Manchester isku arkay labada naadi ee hogaanka u haya horyaalka Premier league dalka ingiriiska, Kulankan ayaa xiisado badan lahaa, Marka koowad labadan kooxod waxay ay aad ugu xifaaltaman magalada Manchester oo ay kawada dhisan yihiin hase yeeshe waxa xiisaha gaarka ah u yeelayay Hadii ay Manchester City badin lahayd waxay u dabaal dagi lahayd hanashada horyaalka oo ay qaadi lahayd waana waxa ay United ku diidanayeen.
Ciyaarta ayaa ku bilaamatay dar dar laga dareemayay kooxda martida ahaa ee Manchester united hase yeeshe wax yar marka ay socotay waxa maamulka ciyaarta gacanta ku dhigtay City oo ciyaar gaagaaban oo cajiiba so bandhigtay taas oo sababtay in kooxda unitedku isqabsan waayan.
Daqiiqadi 25 kooxda City ayaa heshay gees kalaad waxaana soo qaaday Leroy Sane waxa Si awod leh madax ugu dhamays tiray hogamiyaha kooxda City ee Kompany, waxa halmar sawaxan farxad leh bilaabay jamaahiirta kooxda City , Ciyaarta ayaana Noqotay 1-0 ay hogaanka ku qabaneyso kooxda Minankeda lagu dheelayay.
Hasugin inaad Fursad idinsiino ayaa lagu yiri United ka waxaana Daqiiqadi 30 gool cajiiba ka dhaliyay Guendogan waxa uu kubad ka helay Sterling kadib waxa u isku si quruxbadan udaba marsaday Matic isagoo dhinac ka dhigay De Gea oo Awoodi wayay inuu ceeb ka bad badiyo kooxdiisa , Ciyaarta ayaana noqotay 2-0 .
Kooxda United ka ayaa Xanaq bilowday hase yeeshe meeshu ma ahaynd Riingaha feerka lagu ciyaro waxaana kaararka jaalaha ku abaal mariyay garsoonaha kulanka hayay .
Qaybtii hore ayaa dhamaatay waxaana lakala aaday qolalka nasashada sidii kooxwalba ay 15 daqiiqo u nasato wixii ka khaldana u saxato .
Markii uu wakhtigii nasashadu maaatay waxaa dib looguso laabtay garoonka sii qaybta danbe loo ciyaaro .
Soomaalidii hore ayaa dhihi jirtay Ciyaari Waagalin danbe .
Qaybti danbe ayaa la baasay hase yeeshe labada kooxod ayaa waxa ay bilaabeen weerar iyo weerar celis United ayaa u muuqtay mid isbadal kusoo sameysay qaab ciyaareedkeda.
Daqiiqadii 53 Pogba ayaa Goal caawintiisu cajiib ahayd ka dhaliyay City , Sanchez ayaa si qurux badan uso qaaday waxa xabad inaba caadi ahayn ku gudbisayay Harrera waxa dhamaystiray Pogba , Ciyaarta ayaana noqotay 2-1 ay weli gacanta sare ku hayso City.
Qaytii City 2 gool ayay 5 daqiiqo gudahood ku dhalisay lkin marakan Pogba ayaa 3 daqiiqo gudahood 2 gool ku dhaliyay.
Daqiiqadii 55 Pogba ayaa Sharaftiisa kor uqaaday waxa uu gool madax ah ka dhaliyay gool haye edenson oo awodi wayay inuu bad baadiyo kubaas , Marakan waxa caawiye cajiiba ahaa Sanchez oo soo qaaday kubada uu Pogba dhaliyay, Ciyaarta ayaa dhexda timi waxa ay noqotay 2-2 koox kastana waxa ay xooga saaratay sidii aya guul u gaari lahayd .
Daqiiqadii 69 Ciyaarta ayaa sida kale isu badashay waxaa hoos martay City waxaana sara martay United, Danilo ayaa khalad ku galay Sanchez taas oo u garsoruhu dhigay , Waxaana u istaagay in uu qaado Sanchez waxa saxiibadiis u tilmaamay in ay madax wada galaan , waa uu soo qaaday waxaaana si qurux badan u dhamaystiray Smalling , waxa isbadaly wajiyadii jamaahirta City waxaana Halmar sawaxan bilaabay Kuwa Guduudan, Ciyaarta ayaa noqotay 2-3 ay ku saramarayso United.
City ayaa dadaal samaysay , Macalin Pep ayaa badalo cajiiba sameyay hase yeeshe Jose waxa uu ad kaystay Gooshiisa .
Ugu danbayntiina Ciyaarta ayaa kuso idlaatay 2-3 ay guusha ku gaartay United waxa ay ka badbaaday ceeb weyn waa hadii ay City Guul gaari lahayde.